ချင်းပြည်နယ် အဆင့်မြင့်ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့် – chinbridge Institute
ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုသည်မှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု၌ သင်ကြားရေးဆရာ/မများ၊ သုတေသနအဖွဲ့ တစ်ခုခု၏ သုတေသီများနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူလေ့လာနေသော ကျောင်းသူ/သားများအတွက် မဖြစ်မနေရှိရမည့် လွတ်လပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ဆရာ/မ၊ သုတေသီများနှင့်ကျောင်းသူ/သားများ လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ရုံသာမက ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင် သည့် မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ သင်ကြားရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုလုပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ဖြစ် သည့်အပြင် အလုပ်လုပ်ပြီး သင့်လျော်သည့် အရည်အချင်းရှိပြီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ၌ အုတ်မြစ်ချသူ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ထားသော လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌နေထိုင်သည့်မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် လူ့အခွင့် အရေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပညာသင်ယူလေ့လာသူ၊ အောင်မြင်မှုရရှိသူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်သည့် လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်၌ ပါဝင်အကျုံးဝင်သည့်အရာများမှာ လွတ်လပ်စွာသင်ကြားပြသခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သုတေသနလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းမေးမြန်းခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စာရေးသားခွင့်နှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်၊ ပညာသင်သည့်တက္ကသိုလ် နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများ လုပ်ငန်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ၌ လွတ်လပ်စွာ အားနည်းချက်များ ရှာဖွေဝေဖန်ဖော်ထုတ်ခွင့်များ ပါဝင်ပါသည်။ (M-J Johnstone 2012:4) ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်က ရှိနှင့်ပြီးသား အတတ်ပညာ၊ အသိပညာများနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် အခြေအနေအပေါ်မှာ လွတ်လပ်စွာစုံစမ်းမေးမြန်းခွင့်၊ သုတေသန လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စမ်းသပ်မှုများဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ မိမိအမြင်များ လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်များကို အားပေးကာကွယ်ထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်း သင်ကြားရေးဆရာ/မ၊ သုတေသီများ၊ ပညာသင်ယူလျက်ရှိသည့် ကျောင်းသူ/သားများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်သူများက လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိသူများ မှ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်၊ မိမိအမြင် များ လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောပိုင်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၌ လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်များ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၌ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ (Cheryl Hudson 2016: 19).
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အဆင့်မြင့်ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့် မည်မျှရှိသနည်းဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့် မည်မျှရှိသနည်းဆိုသည့်အချက်ပေါ်မှာ မူတည်နေပါသည်။ အတိုချုပ်ဖော်ပြရရင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ စစ်တပ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်သည့် စနစ်ဆိုးကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကို ယနေ့အချိန်ထိ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဦးနေဝင်း အစိုးရခေတ်မှ ယနေ့ NLD အစိုးရခေတ်အထိ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၌ လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်သည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဆရာ/မများနှင့် ကျောင်းသူ/သားများ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံရနေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရသည့်အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရသည့် ဆရာ/မများနှင့် ကျောင်းသူ/သားများပင်လျှင် မနည်းတော့ပေ။ (Censorship News No. 18, 1992) အာဏာရှင်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများအပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းသည် ကြီးမားသော အပြစ်တစ်ခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်စမှ ဇွန်လအထိ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့် ကာကွယ်တားဆီးသည့် ဥပဒေကျူးလွန်သည်ဟုဆိုကာ လူဦးရေ အယောက်(၂၅၀) ကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထောင်ချခြင်းနှင့် ဒဏ်ငွေဆောင်စေခြင်း စသည်ဖြစ်ရပ်များ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်မြင့်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ရခြင်းမှာ တက္ကသိုလ်များ အနေဖြင့် မိမိတို့တက္ကသိုလ်အတွက် လွတ်လပ်စွာ စီမံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်နှင့် အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ (Ei Shwe Phyu 2018: The Myanmar Times). ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ အတည်ပြုပြင်ဆင်သည့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများ လွတ်လပ်ခွင့် အနည်းအကျဉ်းပေး အပ်ထားသော်လည်းပဲ ၎င်းဥပဒေအပေါ် ဆရာ/မများနှင့် ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း အများစုက ကန့်ကွက် ဝေဖန်လျက်ရှိနေပါသည်။ ဆရာ/မများနှင့် ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများက ကန့်ကွက်ဝေဖန် ရသည့် အကြောင်းမှာ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအရ အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပုံ ကို လေ့လာရာမှာ ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုစနစ် များနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ (Ei Shwe Phyu 2018: The Myanmar Times) အထက်(ဗဟို)အုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကြီးမားစွာရှိနေခြင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် သင်ကြား/ယူရသည့် ဘာသာရပ်များအပေါ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခွင့် မရှိတော့ပေ။ ဆရာ/မအသစ် (သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မည့်ကိစ္စမှာလည်းပဲ တက္ကသိုလ်များက လွတ်လပ်စွာစီမံဆောင်ရွက် ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝ မရရှိပေ။ ကျောင်းသူ/သားများက မိမိသင်ယူချင်သည့်ဘာသာရပ်၊ တက္ကသိုလ်များ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် မရရှိပေ။ မိမိသင်ယူနိုင်သည့် ဘာသာရပ်နှင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်များကို တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအမှတ် များခြင်း၊ နည်းခြင်းအပေါ် မှီတည်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်သူတိုင်း လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ယူခွင့်နှင့် တက္ကသိုလ်များရွေးချယ်ခွင့် မရှိတော့ပေ။
ထို့သည်သာမကဘဲ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများက တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောပွဲကျင်းပခွင့်၊ အထူးသဖြင့် ပြင်ပပညာရှင်များ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဟောပြောခွင့်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခွင့်များ မရှိပေ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများက တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဟောပြောပွဲ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရန် ဆောင်ရွက်လိုသည့်အခါ ဆွေးနွေးရမည့်ခေါင်းစဉ်၊ အကြောင်းအရာ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် အမည်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည့် လူဦးရေအားလုံး ကျောင်းအုပ်ကြီးပါမောက္ခထံ ပြည့်စုံစွာတင်ပြပြီး ခွင့်တောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက်နေ့၌ လိုက်နာရန် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်သည့် အရာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများက တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာမိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် ခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခွင့်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများက ရှင်းလင်းဖော်ပြသည့်အတိုင်း လက်ရှိတက္ကသိုလ်အားလုံးသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရက စီမံအုပ်ချုပ် အမိန့်ပေးမှုအောက်မှာ ရှိနေသည့် တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ၌ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်(သို့မဟုတ်) လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့် မရှိရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်အသီးသီးအပေါ် နိုင်ငံတော်အစိုးရ (အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန) က အထက်(ဗဟို) အုပ်ချုပ်မှုစနစ် လျှော့ချနိုင်ပြီး တက္ကသိုလ်များက မိမိကံကြမ္မာ မိမိဖန်တီး စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှသာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်း ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့် အပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Note: Written by Za Peng Lian, and translated by Van Kung Lian
Previous Post စိုက်ပျိုးရေးသိပံ(လုံပီး)တွင် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
Next Post ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး